မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: လျှို့ဝှက်တံခါးကို ဖွင့်တဲ့သော့
သည်ဆောင်းပါး ဟာ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ သည်လိုညွှန်းဆိုတာမျိုးကို ကျွန်တော် တော်တန်ရုံနဲ့ ညွှန်းဆိုလေ့ မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် သည်ဆောင်းပါး မှာတော့ အထက်ပါအတိုင်း ညွှန်းဆိုရပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ ဘ၀ပြဿနာ များစွာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းခဲရတဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိတတ်သလို၊ ဖြေရှင်းဖို့ လမ်းစ ရှာမတွေ့တဲ့ အထိလည်း …တစ်ခါတစ်ရံ ဦးနှောက်စားရတတ်ပါတယ်။
အဲဒီ့လိုပါပဲ …ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ လေ့လာအားထုတ်နေကြတဲ့ ပညာရှင်အမျိုးမျိုး မှာလည်း …..ဆိုင်ရာ ပညာနယ်ပယ်အလိုက် …စူးစမ်းရှာဖွေ အဖြေထုတ်ရခက်ခဲတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါး ဟာ အဆိုပါကဲ့သို့သော ပညာရပ်ဝန်းနယ်ပယ်အသီးသီး က ပညာရှင်တိုင်းအတွက် အလွန်အင်မတန်မှ အကျိုးပြုနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့အတွက် ….အထက်ပါအတိုင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူကိုယ်တိုင် …နှစ်ပေါင်း များစွာ ….မိမိလေ့လာလိုက်စားရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာ အဖြေမှန်နဲ့ ဝေးပြီး ခေါင်းစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ခုထိလည်း လေ့လာဖို့ အမြောက်အများ ကျန်နေသေးတာ အမှန်ပါဘဲ။ လေ့လာရင်း လေ့လာရင်း ….ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုစာလောက် အရောက်မှာတော့………………. ပညာရပ်တွေကို လေ့လာလိုက်စားရာမှာဖြစ်စေ… ၊ အင်မတန် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဘ၀ပုစ္ဆာများကို အဖြေထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ဖြစ်စေ…ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တွေရဲ့ အင်အားကို အသုံးပြုပြီး အဖြေရှာနိုင်စွမ်း ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူ အနေနဲ့ကတော့ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာလိုက်စားရာမှာ အများဆုံး အသုံးပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူနည်းတူ … စာရေးသူရဲ့ သင်တန်းသားများ ၊ သင်တန်းသား မဟုတ်သူများ အားလုံးအတွက် ..အထက်ပါ နည်းစနစ်ကို သေချာဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် …..ရေးသားပြုစု ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
အဖြေရှာခြင်း ပြုရာတွင် လိုအပ်သော အခြေခံအချက်များ
(၁) အဖြေရှာရမည့် နေရာ
(၂) အဖြေရှာရမည့် အချိန်
(၃)အဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုရမည့် ပစ္စည်းများ
(၁) အဖြေရှာရမည့် နေရာ ….
သင်နေသော နေရာ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ယွန်းယွန်းထောင့်တစ်နေရာ ကို အသုံးပြုပါ။
ထိုနေရာတွင် အနီရောင်များ များနိုင်သလောက် များနေလျှင် ပိုမို ကောင်းမွန်ညီညွတ်၏။
သောကြာနေ့သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြေအနေအရ အခြားနေ့ရက်များတွင်လည်း ဆိုင်ရာ အချိန်နာရီပိုင်းများတွင် အဖြေရှာနိုင်သည်။ ယင်းသို့အဖြေရှာရန် အတွက် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာ ရပ် ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ သောကြာအခါ တိုင်းသည် အဖြေမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရန် အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း စွဲမြဲစွာ သိရှိထားရမည်။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ မလေ့လာခဲ့ဖူးသေးသူများအတွက် ဆိုင်ရာနေ့ရက်များ အလိုက် သောကြာအခါ ဖြစ်တည်သော အချိန်နာရီပိုင်းများကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားသည်။ ယင်းတို့ကို လေ့လာမှတ်သားပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့ …. ၀၀း၀၀ မိနစ်(တနင်္ဂနွေနေ့သို့ စတင်ကူးချိန်) မှ နံနက် ၁း၃၀ မိနစ်ကြား
နံနက် ၇း၃၀ မိနစ် မှ …. နံနက် ၉း၀၀ ကြား
ည ၇း၃၀ မိနစ် မှ ….. ည ၉း၀၀ ကြား
တနင်္လာနေ့ …. နေ့ခင်း ၁း၃၀ မိနစ် မှ … နေ့ခင်း ၃း၀၀ ကြား
အင်္ဂါနေ့ …. နံနက် ၁း၃၀ မိနစ် မှ ..နံနက် ၃း၀၀ ကြား
နံနက် ၉း၀၀ မှ နံနက် ၁၀း၃၀ မိနစ် ကြား
ည ၉း၀၀ မှ ည ၁၀း၃၀ မိနစ် ကြား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ …. ညနေ ၃း၀၀ မှ ညနေ ၄း၃၀ မိနစ်ကြား
ကြာသာပတေးနေ့ …. နံနက် ၃း၀၀ မှ နံနက် ၄း၃၀ မိနစ် ကြား
နံနက် ၁၀း၃၀ မိနစ် မှ .. မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ ကြား
ည ၁၀း၃၀ မိနစ် မှ .. ညဉ့်သန်းခေါင် ၁၂း၀၀ ကြား
သောကြာနေ့ နံနက် ၆း၀၀ မှ ၇း၃၀ ကြား
ညနေ ၄း၃၀ မိနစ် မှ ၇း၃၀ မိနစ် ကြား
စနေနေ့ နံနက် ၄း၃၀ မိနစ် မှ .. နံနက် ၆း၀၀ ကြား
မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ မှ နေ့ခင်း ၁း၃၀ မိနစ် ကြား
(၃) အဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုရမည့် ပစ္စည်းများ …..
နာရီ ၊ ပြက္ခဒိန် အမျိုးမျိုး ၊ ဓါး ၊ ပေတံ ၊ ကာကူလေတာ ၊ ……စသည်။
ယင်းတို့အားလုံး ကို မဆိုလို ….အဆင်ပြေသော …ပစ္စည်းအချို့ကို မိမိနဘေးတွင် ထားပါ။ ယင်းတို့ကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေရင်း မိမိ အဖြေရှာလိုသော အချင်းအရာကို စူးစမ်းရှာဖွေ တွေးတော အဖြေထုတ်ယူပါ။
ကျွန်တော် …. သော့တစ်ချောင်း လက်ဆောင် ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သိပ်လွယ်လွန်းလို့ ….၊ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဘာမှ မထူးဆန်းလို့ ….သံသယ စိတ်တွေဝင်နေမယ့် အစား လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ မိမိဘက်က စိုက်ထုတ်ရမယ့် ….ယုံကြည်မှု ၊ ဇွဲ ၊ အရည်အသွေး စတာတွေကိုတော့ ….ပေးဆပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဘာမှ အရင်းမစိုက်ဘဲနဲ့တော့ အလကား ဘာမှ သင် မရနိုင်ပါ။
ကွန်ပြူတာပညာရှင်တွေ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေ၊ သမားတော်ကြီးတွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ၊ စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာရှင်တွေကို တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ ….မောင်ဖုန်းပြောတဲ့ ဟောဒီ့ နည်းလေးကို လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါ။ ပြီးတော့မှ ကျေးဇူးတင်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်လိုမှ အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာတံခါးတွေ ကို ဖွင့် မယ့် သော့တစ်ချောင်း လို့ပဲ ဆိုပါရစေ။
ပညာသင်နေယူနေဆဲ ကျောင်းသားများ (အထူးသဖြင့် သချာင်္သိပ်ညံ့တယ် ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ) အတွက် လည်း ဒီနည်းစနစ်က အင်မတန် အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ကျမှ ယုံတယ် ဆိုသူများ အတွက်လည်း ..မောင်ဖုန်းက သည်နေရာကနေ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ပညာ ရပ်ကို ဒီနည်းနဲ့ ဖော်ပြပြီး ….ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကြောင်း သက်သေပြလိုက်ရပါတယ်။
phone . 01 618 469
Posted by Sayarphone at 9:38 PM Labels: အဆောင်/ယတြာ/အစီအရင်